Nezvedu | Hangzhou Zkong Networks Co, Ltd.
MaESL edu akagadzirira kushandiswa muBluetooth uye NFC tekinoroji, yakazara graphic, uye matatu-mavara kuratidza. Kunze kwekuratidzira ruzivo rwechigadzirwa semutengo, stock, uye kusimudzira, isu tinogona zvakare kugadzirisa zvinyorwa zvacho kune chero ruzivo runoratidzwa uye zvimiro zvemhando zvinoda.
Nemhando yepamusoro matekinoroji egore dhizaini uye isina waya kutaurirana, Zkong yakanyatso kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvezviuru zvezvitoro kutenderera pasirese, uye kuvabatsira vapone mudambudziko rekushomeka kwekudyidzana kushanda, mutengo wepamusoro kukanganisa, mwero unotengesa wekutengesa uye kuwedzera kushanda mitengo .
Yakatangira mukugadzira emagetsi masherefu emagetsi (ESLs), tiri kukura sekambani inotungamira inopa maIoT zvishandiso uye Cloud chikuva icho chinounza seti yakazara yemhinduro nemasevhisi. Yedu mhinduro mhinduro idanho rakakosha kuzvitoro zvine hungwaru kushandura kubva kuchinyakare zvidhinha nemadhishi kuenda kune Omnichannel bhizinesi. Uye isu tinobatsira vatengesi nevatengi kubva kune zvirinani zvirimo muchitoro, neizvo, vatengi vanogona kuwana mutengo, kukwidziridzwa, huwandu hwezvitoro, ongororo yemagariro, uye chero ruzivo rwavanotarisira kubva pasherufu, uye vatengesi vanogona kugamuchira ruzivo rwevatengi nekukurumidza kubva kune data hombe uye kugadzirisa kutengesa kwavo nenzira inoshanda zvakanyanya uye inodhura.
Kwemakore anopfuura gumi nemashanu, isu takawana yakatanhamara rekodhi rebhizinesi, uye takashandira vatengi vanobva kunyika makumi matatu neshanu. Isu tinoshanda takabatana pamwe nemazhinji emhando yepamusoro yekutengesa, senge Alibaba Group, Lenovo Group, Vodfone, China Mobile, Coop Group, E-inki, Qualcomm, nevamwe vazhinji.
Maonero edu ndeekunyorera Cloud Magetsi masherufu zvinyorwa (ESLs) zveMumwe neumwe Smart Store. Basa redu nderekuwedzera bhizinesi rinotonyanya kubatsira pasirese. Tinogamuchira vadyidzani pasirese kusimbisa kubatana kwakadzika, uye isu takagadzirira kusimudzira kutengesa kwako uye kugadzirisa ako marara nemhinduro dzakagadziriswa.
Regai zviuru zvitatu zvekushandira pamwe zvitye kusiya mapepa echinyakare emari uye vataure kumasefu zvakananga.